Okushiwo amaphupho mayelana namasongo wesiliva: ukuhlanganyela, ngetshe, kunesipho
Ukuchazwa kwamaphupho lapho isiliva igoqa khona
Kusukela ezikhathini zasendulo izindandatho zesiliva ziye zafakwa endaweni yokugcina imilingo yokuvikela umnikazi wayo emimoya emibi kanye nezinhlekelele. Kuze kube yilolu suku, kukhona inkolelo yokuthi ukukhanya okubukhali kwalokhu okucwebezelayo kwesiliva kusho ukuthi sekuyithinte kabi. Indandatho yesiliva inencazelo ekhethekile emaphupheni, okuhunyushwa ngabahumushi bephupho, njengezibonakaliso ezinamandla namabhondi. Ngakho yini engamthembisa umuntu iphupho ngesineke yesiliva?
Kungani izindandatho zesiliva
Njengokuphila kwangempela, futhi ngamaphupho, indandatho yesiliva inezinombolo eziningi zezincazelo ezingokomfanekiso. Ngakho-ke, isibonelo, isithombe somhlobiso omuhle futhi ohlanzekile singathembisa inhlalakahle yomndeni wephupho, impilo enamandla, impumelelo ebhizinisini lebhizinisi. Izincwadi eziningi zokuphupha, ukuhumusha incazelo yaloluphupho, kufanele ucabange ukuthi isiliva sinempahla yemilingo nokuphulukisa. Okunye okubalulekile ukuthi ulale ubuthongo: ukulahlekelwa komkhiqizo wesiliva noma ukuphonsa ngengozi engxenyeni engcolile - linda ukwehluleka.
Ngokuvamile, ukuhumusha okuningi kufanekisela ithemba elihle kumaphuphi noma liwuphawu lokuxwayisa kumcimbi othize.
Ngokuvamile, iphupho ngendandatho yesiliva litshela umuntu ukuthi okhethiweyo wakhe uhlala ethembekile futhi enothando. Lokhu kuyisibonakaliso esiqinisekisayo sokuthi ubuhlobo bakho nomuntu othandekayo bukhula ngokuvumelana futhi buzinzile. Umshado wakho ngeke ukwazi ukubhubhisa noma yikuphi ubunzima nokulingwa. Uma iphupho elinjalo libonakala othandweni nomuntu wesifazane, kusho ukuthi okhethiweyo wakhe naye uzizwa ezwa ngaye. Ngaphezu kwalokho, kulo muntu awukwazi ukungabaza: uzobe ethembekile kakhulu futhi othandana.
Ukuphupha amasongo amaningi esiliva kusho ukuthi kukhona abantu abanele endaweni yakho abazokusiza ngaso sonke isikhathi futhi bakusekele ngesikhathi esilukhuni. Kungaba abangane noma izihlobo.
Isiliva elimnyama ephusheni (kungakhathaliseki ukuthi liyindandatho noma enye ingubo yezinto zokucweba) kuyisibonakaliso sokuba khona kwabantu abanobukhwele kanye nezifiso ezimbi, okuyinto nganoma yisiphi isikhathi esingalimaza impilo yakho. Zama ukuqaphela abantu abangenangqondo abajabule ngempumelelo yakho futhi bahlale bekhononda mayelana nesiphetho.
Kungani ngiphupha ukuthola indandatho yesiliva
Thola isipho noma uthole indandatho yesiliva ibonisa injabulo ebuhlotsheni obunothando. Ubuqili nokukhaphela - ngeke ushintshwe. Ngemuva kwephupho elinjalo, lindela izikhathi eziningi zothando, izingxoxo ezifudumele, izimanga ezimnandi.
Iphupho elinikeziwe elingashadile lingaphupha ngesikhathi sokuphakanyiswa kokushada. Uma kuvunyelwene, umshado uthembisa ukude futhi ujabule. Kwabesifazane abengeziwe abavuthiwe, ukuthola ubucwebe besiliva kusho ukuthola umngani okungenzeka ube mncane kunawe.
Kuyinto ephawulekayo, uma indandatho eyitholiwe noma eyanikezwa ihlotshiswe ngamatshe ayigugu - lesi simbozo sithembisa umcebo wephupho nokuchuma. Noma yikuphi ukuqala ngemva kwephupho elinjalo lizophela empumelelweni. Ukufaka isiliva ngamatshe e-ruby kusho ukuthi maduze lo mphupho uzothola uthando lwalo lonke impilo.
Njengoba ubona, iphupho mayelana nendandatho yesiliva kungaba uphawu oluhle noma isixwayiso esibhekiswe kuphela ekuzuzeni kwakho. Ngakho-ke, ukubona leli phupho - ungajabula kuphela!
Kubukeka kanjani ukubulala? Ukuhunyushwa kwezincwadi zamaphupho adumile
Kungani siphupha ingubo. Ukuchazwa kwamaphupho ngokugqoka
Inkukhu engathandekayo: zokupheka ezinkukhu okumnandi emgodini
Indlela yokulahlekelwa ama-kilo angu-5 ngesonto: izidlo ezintathu eziphumelelayo kakhulu!
Izindlela zokulwa nokulahleka kwezinwele
Imfucumfucu evela emagqumeni e-sauce esiphundu
I-Easter cottage shizi
Umsoco omuhle weminyaka ehlukene
Burito for breakfast
I-Brutal Jason State kanye nabaqaphi bayo abanobuciko
Nezhdanchik ... Yeka ukuthi izidumi zithinta kanjani ukunqoba kukaDonald Trump emakhethweni ase-US, isithombe